Global Voices Amin’ny Teny Frantsay : Ny Safidin’Ireo Mpandika Teny Ny Taona 2011 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2012 11:32 GMT
Amin'ny fisian'ny mpanoratra an-tsitrapo ary mpandika teny maherin'ny 500, Global Voices dia tambazotra tokana maneran-tany izay manome fahafahana manaraka ny vaovao amin'ny alalan'ny fifanakalozana amin'ny tambajotra sosialy. Ny Global Voices amin'ny teny Frantsay [fr] dia iray amin'ireo vohikala 20 mahery amin'ny tetikasa fandikan-teny Lingua , ary iray amin'ireo be mpamaky indrindra manerana izao tontolo izao amin'ny vohikala Global Voices Lingua.
Efa nanomboka ny taona 2007, tamin'ny fotoana nanokafana ilay vohikala tamin'ny teny Frantsay, dia teo amin'ny 200 teo ho eo ireo mpilatsaka an-tsitrapo [fr] nandika teny ary manohy mandika gazety sy lahatsoratra avy amin'ny fiteny isan-karazany ho amin'ny teny Frantsay , isan'andro. Ny “fianakavianay” dia miaina any amin'ny kaontinanta tsirairay : ny “francophonie” dia tena manerana izao tontolo izao tokoa !
famantarana Global Voices amin'ny teny Frantsay
Ny taona 2011, ireo mpandikateny amin'ny teny Frantsay dia nahavita ny fanamby sarotra tanterahana tamin'ny famoahana ny revoliosiona sy ny fitroarana nisy nanerana izao tontolo izao teo amin'ny tontolo miteny Frantsay amin'ny alalan'ny fandikana lahatsoratra anaty bilaogy an-jatony (miaraka amin'ilay mpiara-mamoaka lahatsoratra, Suzanne Lehn, ery amin'ny lohalaharana !).
Kanefa, toy ireo namanay mpandikateny ao amin'ny Global Voices amin'ny teny Espaniola [es], tamin'ny fotoana nanontanianay ireo mpandikateny hoe inona ny fandikan-teny nandona azy ireo indrindra ny taona 2011, tsy tonga dia mamaly ry zareo hoe “Ny Lohataona Arabo”. (Global Voices dia nanaraka sy nandika ireo bilaogera avy amin'ny Tontolo Arabo nanomboka ny taona 2004.)
Ny safidin'ireo mpandika teninay ny taona 2011 dia mampiseho ny fankasitrahan'izy ireo ny Filozofian'ny Global Voices : mibaliaka masoandro ho an'ny firenena, ny toerana, ny olona, izay tsinontsinoavin'ny filazam-baovao mitana ny netim-paharazana (hatrizao, farafahakeliny).
Avy aty an-kavia mankany an-kavanana, ny ambony : Samantha, Abdoulaye, Fabienne, Ange, Lou. Ambany : François-Xavier, Noële, Gaël, Thalia, Stéphanie. Miarahaba sy misaotra ireo rehetra mpandray anjara!
Abdoulaye Bah, mpisotro ronono Gineana avy amin'ny firenena mikambana mipetraka ao Roma, dia mahatsiaro manokana an'i Afrika :
Tena ankafiziko ilay lahatsoratra mikasika ny fandresen'ny mpanohitra tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna tao Mozambika. Io fandresena io dia nampianatra ny mety handresena amin'ny fifidianana ao aminà firenena Afrikana iray, tsy misy hosoka avy amin'ireo olona eo amin'ny fitondrana ary tsy andaniana vola be.
Noële Belluard-Blondel, mpandikateny matihanina mipetraka ao Frantsa, no voalohany nandà ny hifidy fandikan-teny tokana :
Ny fandikana lahatsoratra nataoko farany ny taona 2011 dia nampanonofy ahy…. ‘Etazonia: Moa ve ny NASA nahita Planeta azo hiainana ?‘ Tiako ny “astronomie”, ary ny fitsidihana ny eny an'habakabaka dia mahaliana ahy. Izany no fikarohana lalin'ny vaninandro ankehitriny, ary mbola vao manomboka isika izao. Hitako fa tena mahaliana be ilay izy, manintona! Tiako ny manindry etoana fa nisy lohahevitra roa hafa koa nahaliana ahy : ‘Bangladesh: Fanoherana Am-pahasahiana Ny ‘Dot’. Ny fahasahian'ny vehivavy sasany dia tena mampanontany tena anao. Tena mampanontany tena ahy. Ary i Shina : ‘‘Mahatadidy ny Toerana nisy anao talohan'ny nakàna an-keriny anao ve ianao?‘ Tamin'ity tranga ity, dia tena tohina tamin'ny fiainan'ireny vehivavy ireny aho. Lohahevitra mampisavorita-tsaina, tena manohina mafy tokoa.
Fabienne Der Hagopian, izay mipetraka any Normandy, dia manao ho laharam-pahamehana ny handika izay tena tiany ny mamaky azy :
Tena misy fahasamihafana be eo amin'ny fitiavanay sy ny safidinay , izany dia midika fa saika ny lahatsoratra rehetra izay mivoaka ao amin'ny Global Voices amin'ny teny Anglisy dia voadika amin'ny teny Frantsay avokoa. Tamin'ny taona 2011, ny lahatsoratra izay tena nandona ahy dia ireo mikasika ny vehivavy tao Yemen sy ny fahasahiany, toy ity iray mikasika ilay Vehivavy revolisionera ity. Mampalahelo hoe ny filazam-baovao nentim-paharazana dia tsy miresaka firy an'izany. Mampahatsiahy ahy ny [mpihira Frantsay] hiran'i Daniel Balavoine, ‘Revolucion.’
Ny safidin'i Ange Pambou, mpampianatra, dia nampiseho ny fahasamihafan'ny lohahevitra rakofana ao amin'ny Global Voices :
Ho an'ny taona 2011, ny tiako indrindra dia ny : ilay lahatsoratra anaty bilaogy mikasika ny “Bidun” tao Koweit (tsy fantatro na ny filazàna azy na ny fomba fisehony), ny iray hafa dia ny” homosexuality” ao Ghana (izay, ankoatran'ny mampiseho ny fahasarotan'ny “homosexuel” ao Afrika, dia mandrodana ny hevitra raikitra manohitra ny “homosexualité”), Taratasy Iray Avy Aminà Tovovavy Shinoa Ho An'ilay Norveziana Mpamono Olona taorian'ny vono olona atao Norvezy, ny fijoroana vavolombelona iray nataon'ilay “mpifindrafindra toeran'ny nokleary” tamin'ny fiandohan'ny loza tao Fukushima, lahatsoratra iray mikasika Ny Fandraràna ny Ady Fifampitorahan-drano Tany Teheran tamin'ny lohataona lasa teo, ary farany, — tsy am-pisalasalana, ny safidiko ambonin'ny safidiko dia ilay lahatsoratra mikasika ny fiainana an-davanandron'ny olona jamba iray izay lasa tsikera tanaty horonantsary.
Stéphanie Camus, izay mitantana vohikala ” e-commerce”, dia manokana fotoana mba “hihainona izao tontolo izao” amin'ny alàlan'ny fandikàna :
Mihevitra aho fa ny fandikako ilay tsingerintaonan'ilay vono olona tao Sabra sy Chatila no tena nisy fiantraikany be tamiko. Nijery ilay lahatsary fotsiny aho, ‘Valse miaraka amin'i Bachir’. Ny tena dikan'ny hoe “Tsy tokony hanadino mihitsy isika’, izay lasa nazava be raha jerena ny tranga toy izany, raha ny hevitro. Anatin'ny tantara mitohin'ny ady lava reny izay mampiseho, araky ny hevitro, ny faharatsiana sy tsy fisiana dikan'ireo ady mitam-piadiana , na ahoana na ahoana endrika isehoany…
Lou F., izay mianatra any “Royaume-Uni”, dia mpankafy ny fiteny misy amin'izao tontolo izao ary mihaona aminà olona mahaliana rehefa mandika teny :
Ny taona 2011, tiako be mihitsy ny nandika ny momba an'i Julie Kertesz, satria izy dia iray amin'ireo olona tiana hifanenàna matetika : mpankafy, mafana fo, ary indrindra, tena manaja ny maha-olombelona. Tena tiako ihany koa ny lahatsoratra mikasika ny tontolon'ny bilaogy amin'ny fiteny “galloise”. Global Voices dia mamela antsika handre ny feo manerana izao tontolo izao, ary mihevitra aho fa mahafinaritra ny fidiran'ny fitenim-paritra anatin'ny fampiaraham-peo iraisam-pirenena amin'izao fotoana !
Samy Boutayeb, ilay manampahaizana manokana ato aminay momba ny fahafahana sy ny kolontsainan'ny rindrambaiko malalaka, dia tsy nety nisafidy :
Raha ny amiko manokana dia, sarotra amiko ny hisafidy satria tiako daholo na ny mamaky na ny mandika ireo lahatsoratra *rehetra* nadikako.
Tahlia Rahme, izay miasa amin'ny “Global Road Safety Partnership” miaraka amin'ny Federasiona Iraisam-pirenen'ny Vokovoko Mena ao Beyrouth, Libanona, dia tena mpankafy ny fanavaozam-baovao fohintsika :
Raha iny nanomboka nandika teny iny aho, dia hitako fa sarotra ny mijanona. Tamin'ity taona ity dia nataoko izay nandikana isan'andro ny zava-misy ao Afovoany Atsinanana. Noraisiko ho toy ny andraikitro ny manazatra izao tontolo izao, indrindra indrindra ny tany miteny Frantsay, miaraka amin'ny faritra Afovoany Atsinanana sy ny vaovaony, ary ambonin'izany mba hanampy amin'ny fanovàna ny fomba fijery azy sy ny hevitra raikitra momba azy.
François-Xavier Ada Afana dia tanora, mafàna fo mpandika teny avy ao Kamerona izay mianatra ao Chypre :
Ny lahatsoratra izay tiako indrindra ny namaky azy sy ny nandika azy, dia, ilay iray mikasika ny Fahaleovantena tao Tanzania : Fijery nahafinaritra ny zava-misy ao amin'io firenena io.
Gaël Brassac dia mipetraka ao Atsimo atsinanan'i Frantsa kanefa hifindra any Japana, ary nisafidy ny endrika “Top 3″ :
1. ‘Global : Bilaogera Mifampitàna Aminà Olona Ambony Manohitra ny Niqaab”, satria io lahatsoratra io dia karazany iray amin'ireo azo ampibaribariana ny “ethnocentric” mpanamarin-tena, sy fandalàna diso tafahoatra loatra ny maha-vehivavy”, ary ny tsy fifandeferana ara-pinoana. 2. ‘Shina : Misaina ny 100 taona hatramin'ny Revolisionan'i Xinhai,’ satria tiako ny tantara sy Shina, koa dia ny fampiarahana ireo roa ireo dia efa mahafaly ahy! 3. ‘Mozambika : Ny ao ambadiky ny fihazonana an'i MC Azagaia,’ satria ireny no karazana lahatsoratra itiavako ny Global Voices, ny fandrakofana ny firenena tsy resahana velively amin'ny filazam-baovao netim-paharazana mihitsy.
Samantha Deman dia nanomboka nandika teny ho an'ny Global Voices fony izy nipetraka tany ‘Singapour’ ary nanome fijery mahafinaritra nty tontolon'ny taona niarahany tamin'ny Global Voices.
Ilay fandikana nataoko voalohany no safidiko, izay nivoaka ny taona 2008: ‘‘Fahasahiranana Miantraika Amin'ny Maha-olona tao Atsimon'i Filipina,’ satria fotsiny manamarika ny fanombohako niaraka tamin'i Global Voices izany. Tiako ilay hevitra hoe afaka manome vaovao ho an'ny hafa aho amin'ny zavatra miseho any amin'ny faritra lavitra andriana any, izay matetika adinodino, ary dia manampy amin'ny fandrafetana fifandraisana eo amin'ny mponina amin'ny lafiny efatra eto amin'izao tontolo izao.